यो हो विश्वको सबैभन्दा धनी गाउँ, हरेक व्यक्तिको बैंक खातामा करोड रुपैयाँ ! - NewsPolar NewsPolar
यो हो विश्वको सबैभन्दा धनी गाउँ, हरेक व्यक्तिको बैंक खातामा करोड रुपैयाँ !
३० जेष्ठ २०७९, सोमबार १४:३२
यो गाउँ चीनको जिआङ्सु राज्यमा अवस्थित छ, जसको नाम वाक्शी हो । यो गाउँलाई चीनको सबैभन्दा धनी गाउँ भनिन्थ्यो । यस गाउँका बासिन्दाको जीवनशैलीले सहरमा बस्ने ठूला ठूला–ठूला व्यक्तिहरूलाई पछाडि छोडेको बताइन्छ ।
चीनको यो गाउँमा जुनसुकै देशको राजधानी जस्तो सुविधा पनि पाउन सकिन्छ । यो गाउँको सुविधा देखेर मानिसहरू यसलाई सुपर गाउँ पनि भन्ने गर्छन् । यस गाउँमा ७२ तलाको गगनचुम्बी भवन छ । यससँगै हेलिकप्टर ट्याक्सी, थिम पार्क र लक्जरी भिला पनि छन् ।
मिडिया रिपोर्टका अनुसार यस गाउँका २ हजार बासिन्दामध्ये प्रत्येक व्यक्तिसँग १ करोड ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ । यहाँ सबैजना भिलामा बस्छन् र सबैसँग लक्जरी कारहरू छन् । यो गाउँमा करिब दुई हजार मानिस बस्छन् । यहाँका मानिसहरु विलासी जीवनशैली बिताइरहेका छन् ।
चीनको वाक्शी गाउँमा स्टिल र ढुवानी जस्ता ठूला कम्पनीहरू छन्, गाउँका अधिकांश घरहरू समान रूपमा बनेका छन् । यी विलासी घरहरू कुनै होटलभन्दा कम देखिँदैनन् । यस गाउँका सडकहरूले मानिसहरूलाई आकर्षित गर्छन् । पहिले यो गाउँ गरिब थियो । यस गाउँलाई सफलताको शिखरमा पुर्याउने श्रेय कम्युनिष्ट पार्टीका स्थानीय सचिव वु राइनाबोलाई दिइन्छ ।
चीनको वाक्सी गाउँ कृषि प्रधान क्षेत्र हो, तर किसानहरूको विचारले यसलाई विश्वको धनी गाउँहरूमध्ये एक बनायो । मिडिया रिपोर्टका अनुसार यी गाउँहरू ६० को दशकमा बसोबास गरिएको थियो । यहाँ सबैले सामूहिक खेती गर्न थाले । गाउँमा फलाम तथा स्टिल उद्योग पनि स्थापना भएका छन् । २१ औं शताब्दीको सुरुमा, यहाँ १०० भन्दा बढी कम्पनीहरू थिए । तीमध्ये फलाम, स्टिल र तंबाकूको व्यवसायसँग सम्बन्धित कम्पनीहरू थिए ।